Baratoon University Oromoo hundi wagga kana lubu qaqali ijoolen Oromoo kan ittti wareegamee, dhigga ijoolee Oromoo bakka hundati bara dhagalayedha, Baratoon Oromoo heedun bara itti qama hiratani dha, Baratoon Oromoo heedun yaakka tokko malee mana hidha keessati darbataman yeero dararama jirandha. Baratoon University fi dargagoon Mana barumsaa sadarka 2faa jiran hiriyoota isaan fi baratoota Oromooo ajeefaman, hidhaman, Qama hirtan fi mana barumsatii argi’atana yaadachuuf ganna (Waxabajiiti hanga Fulbanati) kana saganta of isaa qoophefachuu qabu:- ini kunsii;
Tulluu fi bakka hin qootamnee hunda maqa ijoolee ajeefaman, hidhaman fi barumsa irra ari’atamanin torbanti guyya tokko walta’aan ba’uun muka ykn bosona dhabuu yaadachuu;
Daboo ykn Dadoo wal ijaruun torbanti yeeroo Lamaa maatii isaanfi Buna, Mango, Muzii, Lomii, Burtkana, Abokado, Appel, kkf dhabuu, qoona qootu fi muka mana wara isaan birra dhabuun kununsuu,
Torbanti guyya lamma wal gurmesesun barumsa gosa university keessati baratanin baratoota sadarka 2faa jiran qayabachisuu ykn barsisuu, fakeenyaf Baratan University Heergea Baratuu ykn Afaan Englishi baratuu baratoota Sadaka 2ffa baratan Heerega ykn Englishih Torbanti yeero lama barsisu;
Waldalee Amanta, NGO fi Misoomi Qoona Oromiyya biqiltuu muka fi biqiltu kudura fi mudura dargagoota Oromoof rabsuun Oromiyya akka biyya magarisaa tattuu gargaruun diriqama lamumati.
Manen barumsa ijoole bakka itti wal qayabachisan dala nama barumsa hayaamuufin Kitaboota isaan itti barisan hayaamuuf ykn mana kitaba akka ini banmee baratoon itti fayadaman goochun baratoon kun akka wal gargaran goochun dirqama mana barumsaati;
Lammi Oromoo Baratoota wagga kana jeequmsa fi gadda gudda keessa turan kana waan danda’ee hundan gargaruu haala hunda isaanfi mijeesun dirqama lamummati.
Baratoon Oromoo Kitaboota Afaan Oromoon maxanfaman kana wal erguusin aadda kitaba dubsuu ijoolee sadarka 2faa jiran barsisun eegree ijoole keenyaf gariidha waan ta’eef addefatamuu qaba.
Baratoon Oromoo yaakka wagga kana siirni Abban Hiree Habasha Ijoolee Oromoo irrati raawatee, baratoota ajeefaman, hidhama, reeban, barumsa irra ari’ataman, kan qama hirtan hundi bareefaman seenan isaan akka galmayee guyya tokko seerati dhiyyatuuf akka irrati hojeetan dhamachuun dhamsaa keenya xumuura.
Innjifannoo kan uumataa Oromooti !!!!